Umkhiqizo wezokwelapha 'Geksikon' (amakhandlela). Ukubuyekeza
"I-Hexicon" - izidakamizwa ezisetshenziselwa ukuvimbela izifo, ezibhekene nokudluliswa ngokocansi (ureaplasmosis, chlamydia, gonorrhea, trichomoniasis, herpes womzimba, i-syphilis), ukwelashwa kwe-colpitis, i- bacterial vaginosis, i- vulvar pruritus, ukukhukhula komkhuhlane. Ifomu eliyinhloko lokukhululwa - izidakamizwa zangasese.
Ukwakhiwa kwesidakamizwa kubandakanya i- bigluconate chlorhexidine, okuyinto into esebenzayo. Ingxenye eyisizayo: i-macrogol.
Isidakamizwa sinesilinganiso sokunciphisa esiphansi lapho sisetshenziselwa ubulili, asinayo umphumela wesistimu.
Isidakamizwa esithi "Geksikon" (amakhandlela), izibuyekezo ze-pharmacologists ziqinisekisa ukuthi lokhu, kunomphumela we-antiseptic, kusebenza ngokumelene namagciwane aguga, ama-virus ahlukahlukene. Kulesi sidakamizwa, isikhunta, izinhlamvu zamabhaktheriya zibonisa ukumelana. Ayikwazi ukuvimbela umsebenzi we-lactobacilli. Kodwa-ke, ukuba khona kwamapulisi, igazi, izinto eziphilayo, izimfihlo ezihlukahlukene kugcina isenzo ngokuqondile ukulungiselela "Geksikon" (amakhandlela). Ukubuyekezwa kodokotela abaningi kunesimo esihle ngenxa yalowo mhlaba othile wezidakamizwa.
Amakhandlela kaHexicon. Imiyalo yokusetshenziswa: umthamo
Ngaphambi kokusebenzisa i-suppositories, kufanele ilahlwe. Ukuze uthole ukwelashwa, lokhu kulinganiswa kusetshenziswa: ikhandlela elilodwa kabili ngosuku. Isikhathi sokwelapha singakapheli izinsuku eziyishumi. Ukuze kuvikelwe izifo ezithathelwana ngocansi, i-suppository eyodwa isetshenziselwa izenzo zesondo ezingavimbelwe.
Isidakamizwa esithi "Geksikon" (amakhandlela), ukubuyekezwa kweziguli kuqinisekisa leli qiniso, alikwazi ukudala ukusabela okubi kakhulu. Ngezinye izikhathi ukuzamazama, ukusabela kwemizwa kungase kwenzeke. Nokho, zidlula ukuhoxiswa kwezidakamizwa. Uma imiphumela emibi yanda futhi ingapheli emva kokuyeka umuthi, udinga ukubona udokotela ozobhala ikhambi lokuqeda lezi zimpawu.
Amakhandlela we-hexicon anemibono elandelayo yokusetshenziswa: ukutholakala kokuxilonga kwamalungu, ukukhula (ngaphambi kocansi).
Akunconywa ukuthatha le mithi nge-iodine ngesikhathi esifanayo. Isidakamizwa sihambisana nezinto ezinamaqembu e-cationic (benzalkonium chloride, cetrimonium bromide). Ungasebenzisi ngama-detergents aqukethe ama-anionic (ama-saponins, i-sodium carboxymethylcellulose, i-sodium lauryl sulfate).
Ukubekezelelana, ukusebenza kahle kwe-suppository akuthinteki izinga lokuhlanzeka kwezitho zangasese zangaphandle. Ngezikhathi zokwelapha, ukukhulelwa, le-ejenti yezokwelapha nayo ivumelekile ukuthi isetshenziswe. Isidakamizwa esithi "Geksikon" (amakhandlela), ukubuyekezwa odokotela kuqinisekisa ukuphepha kwayo, akukwazi ukubangela izimpawu zokudlula ngokweqile.
Lesi sidakamizwa kufanele sigcinwe ezindaweni ezivikelwe kahle kusukela ekukhanyeni kwelanga, umswakama, emazingeni okushisa angadluli +25 C. I-shelf esiphezulu yokuphila iminyaka emibili. Ngemuva kokuphelelwa yisikhathi kwalesi sikhathi, ukusetshenziswa kwezidakamizwa kungavunyelwe ngenxa yokulahlekelwa kwezakhiwo zomzimba kanye nokwenyuka kokuthuthukiswa kwemiphumela enobuthi. Isidakamizwa sithengiswa ngokukhululekile kuma-pharmacy.
Ukubuyekezwa kwama-suppositories "I-Geksikon" inhle. Leli qiniso libangelwa izakhiwo zalo zezokwelapha, ukuqala okusheshayo kwesenzo, amathuba okuba nemiphumela emibi. Izinqununu ezingabalulekanga nazo zandisa ukuthandwa kwesidakamizwa, futhi kufakwe isimo sokutholakala kwayo, izindleko eziphansi. Phakathi nesikhathi sonke sokusetshenziswa, akubekho amacala okudlula ngokweqile, okunikeza umuthi ngezinga eliphezulu lokuphepha.
Amafutha okuphulukisa isilonda
Ukulungiselela isisombululo 'Fervex' - imiyalelo yokusetshenziswa
Konevsky laseTheotokos: incazelo, amaqiniso athakazelisayo kanye nokubuyekeza
Hardware wekhasi. Ukwazana lokuqala
Izazi zemvelo Omkhulu owenza emhlabeni wonke ukuvula
Imiyalo yokuthi ungabeka kanjani umculo ku-iPhone
Cathedral of Palermo, Italy: incazelo, umlando kanye ezithakazelisayo amaqiniso
Ceiling omiswe ilondolo: obandayo futhi ukufakwa